Mgbe ụfọdụ Macs abụghị nke Smart | Martech Zone
Mgbe ụfọdụ Macs abụghị Smart
Wenezdee, Machị 28, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ bụrụ na m ga-ajụ onye ọ bụla na-ahụ maka nkà na ụzụ ihe bụ isi faịlụ faịlụ dị na andntanetị na karịa, ha ga-ekwu MP3. Ọ bụ usoro agbakọro agbatị nke na-ekwusi ike na ụda nke ụmụ mmadụ na-anụ. Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na m bụ Apple (ma ọ bụ Microsoft), enwere m ike ịnye MP3 dị ka ntụgharị faịlụ nkịtị n'etiti mmemme m.
'Sdị faịlụ ndabara Apple bụ azu. Anụla ya? Ọ gwụla ma ị na-arụ ọrụ na Mac, ikekwe ọ bụghị.
Maka gị Mac gurus, enwere m ike isi n'isi m. Biko gbazie m ma ọ bụrụ na m mejọrọ, mana agafere m mmemme ole na ole tupu m nwee ike ịchọpụta otu esi agbanwe ihe azu faịlụ na MP3.
Trada ụda? Nope.
QuickTime Pro? Nope.
Ya mere, m na-eme ụfọdụ Google aiff ka mp3 ma chọta a ụyọkọ isiokwu na iji iTunes (know mara, na FREE software) na ọ bụ na e weere na o kwere omume. Naanị ịtọ ntọala Mbubata mbubata faịlụ na ụdị faịlụ MP3.
Jụụ! N'ihi ya, m na-ebubata faịlụ m dere na iTunes, nwe! Ummm… no voila.
Ihe a n’ezie amalite inu.
N'ikpeazụ m na-eme aka nri pịa ụda faịlụ na iTunes ma ana m ahụ ya… ebe ọ bụ…Tọghata MP3. Chineke hụrụ m n'anya. Iswa ziri ezi. Mgbe otu awa gasịrị, emesịrị m nwee ike ịgbanwe faịlụ m. Emela!
Ugbu a ọ bụrụ na m maara naanị ebe ọ na-etinye ya…
Emechara m chọpụta otú m ga-esi copyomie ihe ndị ahụ MP3 faịlụ site na iTunes ma tinye ya na saịtị m. M maara na RIAA dị n'azụ a n'ụzọ ụfọdụ. Enweghị m ike ikwenye na ngwa ọ bụla nke ụda ọgbara ọhụrụ enweghị atụmatụ pụtara ìhè ma ọ na-arụ ọrụ na MP3s na ndabara ma ọ bụ na-ebupụ na MP3 na-akpaghị aka. Onye na-eme ihe ọchị.
Douglas Karr Wednesday, March 28, 2007 Sunday, October 4, 2015
Obi ụtọ 500th Post gị!
Mar 28, 2007 na 9: 52 PM
O were m oge ịghọta otu esi atụgharị MP3 na mac kwa.
Faịlụ kwesịrị ịdị na ndabara iTunes music ndekọ gị. Ma ụzọ kachasị mfe bụ ịdọrọ faịlụ ahụ ozugbo site na listi ọkpụkpọ iTunes na desktọọpụ gị ma ọ bụ folda ọ bụla. 😉
Mar 28, 2007 na 9: 54 PM
Na-akpa ọchị. Nye ga-atụtụ ụda ka ọ dọkpụrụ ya?
Dawud Ọrụ ebube
Mar 29, 2007 na 9: 28 AM
Nke ahụ bụ ọ bụrụ na ị gbanweela koodu nbudata mbubata iTunes - AAC na mp3.
Mar 29, 2007 na 9: 30 AM
Echere m na okwu ntụgharị mp3 nwere ihe jikọrọ ya na ikike mp3. O yiri ka m gụrụ ebe ọ bụla na nzuzo agaghị etinye ya na ngwanrọ mkpọsa. Echere m na nke ahụ bụ eziokwu. Biko mezie m ma ọ bụrụ na mehie.
Mar 29, 2007 na 11: 56 PM
“Ugbu a ọ bụrụ na m maara naanị ebe ọ tinyere ya?”
Kedu maka ịpị aka nri na egwu ahụ ọzọ wee họrọ “Gosi na Onye Nchọta”?
Dị nnọọ smart, ọ bụrụ na ị ga-ajụ m 😉
Mar 30, 2007 na 6: 40 AM
Nwere ike ịgwa m bụ onye iTunes ọhụụ, Tibor? Daalụ! Ee ee, enwere m nkụda mmụọ na ịkwa emo… ahụmịhe onye ọrụ nke OSX dị mma. (Vertụgharị na MP3 abụghị, n'agbanyeghị!)
Mar 31, 2007 na 7: 36 PM
Doug: Ọtụtụ oge ọ dị mfe karịa mgbe ahụ ị ga-atụ anya, m ga-ekwu. Mana m kwenyere: otu iTunes (na iPhoto, maka okwu ahụ) si ejikwa ụfọdụ ihe nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya.
Mar 31, 2007 na 6: 48 PM
Na mgbe Googling, n'iji amamihe see okwu nwere ike inye aka:
“Aiff ka mp3” osx
Na-enye nsonaazụ kacha mma.
Obi ụtọ ụbọchị nzuzu nke Eprel 🙂
Mar 31, 2007 na 6: 43 PM
.aiff bụ usoro na-anaghị mpikota ọnụnụ. Nke dị mma ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ọkachamara na ụda (dị ka ndị ọrụ mac ole na ole na-eme; mgbe eserese na vidiyo, nhazi-ụda bụ 3rd eji ngwa ngwa maka Macs)
Nke sị, Enwere m oke na QT anaghị atụgharị MP3.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtụgharị faịlụ ụda na oge niile, enwere m ike ịkwado ngwa $ 10 Ntụgharị ụda.
Mgbe ị na-achọ ngwanrọ Mac, m ga-akwado ya Mac Mmelite Gugul
Apr 1, 2007 na 10: 22 PM
Na nkwekọrịta na aha a blog ntinye:
Ọtụtụ ihe na-akwọ m akụ maka macs. M na-eji sistemụ abụọ eme ihe kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a ma ana m ewere na m tozuru oke ịme ụdị statemnts a. M na-ewe iwe mgbe “andmụbawanye” windo bọtịnụ na-eme windo… naanị ntakịrị ibu. Ọzọkwa, gịnị kpatara na m enweghị ike ịdọrọ ihu ọ bụla nke windo windo iji gbanwee ya? Ma gini kpatara na igodo nhichapụ anaghị arụ ọrụ dị ka igodo ihichapụ ezigbo kwesịrị?
Anọ m na-ele onye na-eme ochie ochie na-agbanyụ G3 n'ihi na bọtịnụ ike dị ka bọtịnụ cd. Kensinammuo imewe? ikekwe ọ bụghị.
Enwere m ike ịga n'ihu na 🙂